दोस्रो ‘चण्डीराज’का रुपमा महासंघमा पशुपति मुरारकाको ‘इन्ट्री’, रोकिएला त चरम गुटबन्दी ? – Clickmandu
पुष्प दुलाल २०७७ मंसिर १५ गते १८:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । लामो समयदेखि महासंघको राजनीतिका खेलाडी चण्डीराज ढकालको ‘पेवा’ जस्तै रहेको विशिष्ट सदस्यको पद यो पटक खुस्किएको छ ।
र, महासंघको विशिष्ट सदस्यको पद प्राप्त गर्ने भाग्यशाली व्यक्ति बनेका छन् पशुपति मुरारका ।
चण्डी र पशुपति दुबै महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरुलाई दिने भन्ने अवधारणाका साथ सिर्जना गरिएको विशिष्ट सदस्यको पद पूर्वअध्यक्षहरुको राजनीति गर्ने थलो बनेको छ ।
आफूलाई सहयोग गर्नेलाई विशिष्ट सदस्य बनाएर महासंघको राजनीतिमा पूर्वअध्यक्षलाई स्थान दिने यसअघिको गलत निरन्तरताको क्रमभंगता गर्न सकेनन् अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ।
भनिन्छ- चण्डीराजलाई ३६५ दिननै महासंघको चुनाव लाग्छ ।
किनभने विशिष्ट सदस्य प्राप्त गरेर महसंघमा सँधै सक्रिय रहिरहनका पूर्वअध्यक्ष ढकाल वर्षैभरी राजनीति गर्थे । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ढकालले धेरै पात्रहरुको प्रयोग गरे । कहिले एउटालाई बोक्थे त कहिले अर्कालाई ।
महासंघमा लामो समय चण्डीको रजगज चल्यो । उनले समर्थन गरेका उम्मेद्धारहरुले निर्वाचन जित्थे पनि ।
तर, यो पटक भने त्यस्तो भएन ।
महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालले चुनाव जिते । चन्द्रलाई चण्डीको समर्थन थियो ।
तर मत परिणामले के बताइदियो भने चन्द्र ढकालले चण्डीले समर्थन गरेकै कारण चुनाव जितेका होइनन् । आफ्नै बलबूँता र पब्लिक रिलेशनले मात्रै चन्द्र चुनाव जित्न सफल भएका हुन् ।
चण्डीराजले जिल्लानगरलाई आफ्नो आधारक्षेत्र भएको दाबी गर्थे । जिल्लानगरको २५/३० मत आफूले जहाँ भन्यो त्यहीँ खस्ने दाबी गर्दै उम्मेद्वारहरुसँग बार्गेनिङ गर्थे ।
यसअघिका परिणामहरुको विश्लेषण गरेर धेरै उम्मेद्वारहरुले चुनाव जित्नका लागि चण्डीलाई भर्याङ बनाए ।
तर, यो पटक विश्लेषण फेल खायो ।
चण्डीको समर्थन पाएका कारण हौसिएका चन्द्र ढकाल जिल्ला नगरको मत परिणाममा प्रतिस्पर्धी किशोर प्रधानभन्दा १ मतले पछि परे । किशोरले ५३ ल्याउँदा चन्द्रले ५२ मात्रै ल्याए । वस्तुगत र एशोसियटमा चन्द्रले राम्रो मत पाए । जसकारण महासंघको चुनावमा ५० प्रतिशत मतभार रहेको जिल्ला नगरको १ मतमा पछि परेपनि चन्द्र नै बजियी भए ।
चन्द्र समूहको दावी के थियो भने जिल्लानगरकै ६० भन्दा बढी भोट ल्याउने । एशोसियट र वस्तुगतमा थोरै मतले अघि हुने र ६५ देखि ७० प्रतिशत मत ल्याएर चुनाव जित्ने ।
तर, ढकाल समूहले दाबी गरे अनुसारको भोट आएन । ढकालले ५४.२६ प्रतिशत मत पाए भने प्रधानले ४५.७४ प्रतिशत मत पाए ।
‘मलाई चण्डीको समर्थन छ, जिल्ला नगरकै भोटले चुनाव जितिहाल्छु’ भनेर ढुक्कसँग बसेका भए चन्द्रले चुनाव हार्ने रहेछन् भन्ने तथ्य मतपरिणामले देखाएको छ ।
गोल्छा-मुरारका प्यानलमा भएका भए चन्द्र सर्बसम्मत बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्थे । वा, अर्को कोही प्रतिस्पर्धी भएको भए अहिलेको भन्दा धेरै मतान्तरले चन्द्रले चुनाव जित्थे । चण्डीराजको शक्ति छ भन्ने भ्रमले चन्द्रलाई यो पटक झन्डै चिप्ल्यायो ।
महत्वपूर्ण त के छ भने सदाबहार विशिष्ट सदस्य भएर महासंघमा राज गर्ने चण्डीराजको शक्ति खोसिएको छ । चण्डीराज अब महासंघको राजनीतिका लागि दाह्रा र नङ्ग्रा झिकेर चिडियाखानामा थुनेको बाघजस्तो निरिह बनेका छन् ।
चन्द्र समूहले चाहेर पनि चण्डीलाई यो कार्यकाल शक्तिशाली बनाउन सक्ने छैन । सक्ने थियो त पहिलो कार्यकालमै अध्यक्ष शेखर गोल्छाको प्रस्तावमा कार्यकारीणी बैठकले पशुपति मुरारकालाई विशिष्ट सदस्य नियुक्त गर्न सक्दैनथ्यो ।
खै किन हो चन्द्र र पशुपति एकै टिममा हुँदा पनि भित्रभित्रै एकले अर्कालाई खासै रुचाउँदैन थिए ।
तर, समयले यस्तो बाध्यता बनाइदियो कि बरियताक्रममा पशुपति चन्द्रभन्दा माथि र शक्तिका हिसाबले चन्द्र पशुपतिभन्दा बलियो पदमा रहेर एउटै कार्यसमितिको बैठकमा अबको २ वर्ष ४ महिना सँगै विताउनुपर्ने छ ।
हुन त चन्द्र ढकालले बरिष्ठमा निर्वाचित भएलगत्तै सञ्चारमाध्यमहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्- ‘तेरो मेरो समूह भन्ने चुनावका दिनसम्म मात्रै हो, अब हामी सबै मिलेर शेखर गोल्छाको नेतृत्व र भिजनमा निजी क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ र बलियो बनाउन काम गर्छौं ।’
पहिलो बैठकमा कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने एजेण्डामा त्यो देखिएन । चुनाव हार्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो प्यानलका डिबी बस्नेतलाई चन्द्रले कोषाध्यक्षको उम्मेद्धार बनाए । सोमबार भएको कोषाध्यक्षको निर्वाचनमा गोल्छा-मुरारका समुहका शुकुन्तलाल हिराचन ४० मत ल्याएर बिजयी भए भने चन्द्र-चण्डी समुहका बस्नेतले ३१ मत मात्रै ल्याए ।
महासंघमा चण्डी व्यक्तिमात्रै होइनन्, प्रवृत्ति पनि हुन् ।
लामो समयसम्म महासंघको राजनीतिमा एकछत्र राज गरेका चण्डीलाई पूर्वघोषणा अनुसार नै गोल्छा-मुरारका समुहले पहिलो बैठकबाटै आउट गरेको छ ।
तर चण्डीले ओगट्दै आएको पदमा मुरारका आएका छन् । पात्र फेरिए पनि अध्यक्ष भएर महासंघ हाँकिसकेको व्यक्ति विशिष्ट सदस्यको रुपमा सक्रिय रहने प्रवृत्ति भने फेरिएन । महासंघको शक्तिकेन्द्रमा रहन मुरारकाले राजनीति गरेको विपक्षीहरुको आरोप छ । र, देख्दा पनि त्यस्तै भयो ।
गोल्छा र मुरारकाले चण्डीसँग जुध्ने आँट गरेकै हुन् । र, चण्डीलाई हराउन सफल पनि भएकै हुन् । र, चण्डी बस्ने कुर्सीमा बस्न मुरारका आएकै हुन् ।
शेखर गोल्छासामू मुरारकालाई विशिष्ट बनाउनूको विकल्प थिएन । किनभने अल्पमतमै रहेपनि चण्डी समूहले कुनै न कुनै दिन दुख दिनसक्छ भन्ने गोल्छालाई प्रष्टसँग थाहा छ । र, त्यसको तर्कसंगत प्रतिवाद गर्नसक्ने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् मुरारका ।
तर मुरारकाले विशिष्ट सदस्य अस्वीकार गरेको भए उनीमाथि पदलोलुपताको आरोप लाग्ने थिएन । राम्रो छवि भएका र अर्थविद्हलाई विशिष्ट सदस्यमा मनोनयन गरिएको भए गोल्छा र मुरारका दुबैको हाइट धेरै नै बढ्थ्यो । महासंघ अझ सक्षम र बलियो हुन्थ्यो ।
विधानमा पूर्वअध्यक्षलाई मात्र विशिष्ट सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छैन । विशिष्ट सदस्यको अवधारणा पूर्व अध्यक्षलाई ल्याउनुभन्दा अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान दिएका र महासंघलाई आर्थिक एजेण्डाको सैद्दान्तिक बाटोमा हिँडाउन सक्ने व्यक्ति ल्याउन खोजिएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज नै विशिष्ट सदस्य पदमा पदासिन थिए । यो पटक मुरारका गए ।
शंकै छैन मुरारका महासंघको राजनीतिका शक्तिशाली खेलाडीकारुपमा उदाएका छन् । ज्यानदेख्दा लिखुरे भएपनि मुरारकाले चालेको दिमागको गोटीले चण्डीको साम्म्राज्य गर्ल्याम्गुर्लुम्म ढल्यो ।
जिल्लानगर र वस्तुगतमा दिनेश र अञ्जनले चुनाव जितेको मत परिणाम आएपछि शनिबार मध्यराति मतगणनास्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा बढी बधाईको ओइरो पाउने व्यक्ति थिए मुरारका ।
अधिकांश मान्छेहरु शक्तिका पछि दौडिन्छन् । हिँजोका दिनमा चण्डीका पछि दौडिनेहरु अब विस्तारै मुरारकाका पछि दौडिन्छन् । किनभने शक्तिशाली व्यक्तिको आशिर्वादबिना नेतृत्वमा आउने संभावना ज्यादै नै न्यून छ ।
यसरी आफ्नोपछि दौडिनेहरुको ताँती लागेपछि शक्तिशाली व्यक्तिले विवेकपूर्ण र न्यायसंगत निर्णय गर्न छाड्दै जान्छ । ‘म नै सर्बेसर्वा हुँ, मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ’ भन्ने अहमता बढ्दै जान्छ । र, पद र शक्तिमा बसिरहन उद्यत गर्छ । मुरारकाको अबको मूख्य चुनौति भनेको यही नै हो ।
तर, चण्डी ढकाल र पशुपति मुरारकाबीच केही फरक छ ।
मोमेन्टो गार्मेन्ट बन्द भएपछि डेढ दशकदेखि चण्डीले आफ्नो मुख्य पेशा र व्यवसाय नै महासंघको राजनीतिलाई बनाउँदै आएका थिए ।
आजका दिनसम्म मुरारका सफल व्यवसायी हुन् । शक्तिको लोभले महासंघमा अलमलिइरहे भने भोलिका दिनमा मुरारका पनि चण्डीजस्तै व्यवसायी नहोलान् भन्न सकिँदैन । र, महासंघलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्नका लागि सँधै विशिष्टको कुर्सीमा बसिरहने चाहना नराख्लान् भन्न सकिँदैन ।
राजनीतिक खेलाडीहरु गुटमा बढी विश्वास गर्छन् । आफ्नो गुटमा भएको व्यक्तिको आङमा भएको भैंसी पनि देख्दैनन् र अर्को गुटको आङमा भएको व्यक्तिको जुम्रा पनि देख्छन् ।
गोल्छा र मुरारका मिलेर अर्को प्यानलबाट चुनाव जितेर आएकाहरुलाई स्थान र सम्मान नदिने अनि अर्को गुटकालाई मान्छेहरुलाई चण्डीलाईजस्तै सिध्याउने खेलमा लागे भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
महासंघमा मिक्स र एक्सिलेन्ट टिम आएको छ । यो टिम गुटबन्दीभन्दा माथि उठ्न सकेन भने भावी दिनमा महासंघ थप कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
चन्द्र चरित्रले गोल्छाका झस्किएपछि…
वास्तवमै भन्दा शेखर गोल्छा र चन्द्र ढकाल ज्यादै घनिष्ट थिए । शेखरले आफू अध्यक्ष बन्दा चन्द्रलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । तर, मुरारकाको चाहना चन्द्रलाई बरिष्ठ बनाउने थिएन ।
चण्डीले विभिन्न स्थानमा जिल्लानगरको भेला गराएर विधान संशोधन गरी गोल्छालाई स्वत अध्यक्ष बन्न नदिने घोषणा गरे ।चण्डीको ब्याकिङ भएका चन्द्र ढकाल पनि विधान संशोधन गरेर शेखर गोल्छालाई स्वत अध्यक्ष हुन नदिने खेलमा सहयाेगी बने ।
ढकालले भित्रभित्रै यस्तोसम्म तयारी गरेका थिए कि विधान संशोधन गरेर गोल्छालाई स्वत अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न सकेको खण्डमा गोल्छा होस् वा अरु जो कोही उसैसँग सीधै अध्यक्षमा चुनाव लड्ने ।
चन्द्रले भित्रभित्रै यस्तो खेल खेलेको थाहा पाएपछि बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको मनमा चिसो पस्यो ।
गोल्छा र मुरारका घनिष्ट मित्र हुन् । निवर्तमन अध्यक्षका हैसियतले महासंघको पदाधिकारी बैठकमा सहभागी हुने मुरारका त्यसअघि खासै बोल्दैन थिए ।
तर, जब गोल्छालाई हटाउने षड्यन्त्र हुनथाल्यो । तब उनी खुलेरै प्रतिवाद गर्न थाले । प्रतिवादमात्रै होइन कि चण्डीराजको षड्यन्त्र असफल बनाउने रणनीति तयार गर्न लागे ।
सबैभन्दा पहिला गोल्छा-मुरारका समूहले चन्द्र ढकाललाई प्रस्ताव गर्यो ‘हामी तपाईंलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्छौं । तपाईंले हामीलाई विधान संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष हुन नदिने षड्यन्त्र असफल बनाउन साथ दिनुपर्यो ।’
चन्द्रले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । त्यसबेलासम्म चन्द्रले दुबै डुंगामा खुट्टा राखेका थिए ।
गोल्छालाई बाहिर बाहिर मेरो साथ र सहयोग छ भन्ने अनि भित्रभित्रै चण्डीसँग लागेर विधान संशोधन गर्न सक्रिय भइरहने ।
महासंघमा विधान संशोधनको रक्साकस्सी चलिरहेको बेला कुनैपनि भूमिकामा नखुलेका एशोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल एकाएक विधान संशोधनको पक्षमा खुले ।
०७५ असोजको दशैंअघि वर्ड ट्रेड सेन्टरमा चण्डीले शक्ति प्रदर्शन गर्न आयोजना गरेको भेलामा चन्द्र ढकाल पनि उपस्थित भए । उक्त भेलामा पूर्वबरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज कर्णिकार, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, एशोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल तथा बस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ उपस्थित भएपछि शेखरलाई झस्कायो ।
सो कार्यक्रममा ढकालले भाषण गर्दा बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर भाषण गरेनन् । उनले साथीहरुको सुझाव साधारणसभामा पेश गर्ने बताएका थिए ।
आफ्नो टिमबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने योजना बनाएका शेखरलाई एकाएक चन्द्र ढकालको मुभमेन्टपछि उनले विधान संशोधन भएमा आफु अध्यक्ष लड्न तयार रहेको सन्देश दिए । ढकालले विधान संशोधन आफु अध्यक्ष बनेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहेका थिए ।
आफ्नो समुहबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने टिममा राखेका चन्द्र ढकाल विधान संशोधनको पक्षमा लागेपछि गोल्छा समुहले विधान संशोधन पक्षमा रहेका किशोर प्रधानलाई आफ्नो प्यानलमा ल्याउने रणनीति बनायो ।
गोल्छा-मुरारका समूह चण्डी समूह फुटाउन सफल
गोल्छा समूहले ३ दशकदेखि चण्डी समूहमा रहेकाहरुलाई आफ्नो समूहमा तान्न सक्रियता बढायो । यो काम गोल्छा आफैंले गर्न सक्ने संभावना अलि कम थियो ।
किशोर प्रधानलाई आफ्नो टिममा ल्याउनका लागि गोल्छाले मुरारकालाई प्रयोग गरे । अर्थात् यो कामको मूख्य योजनाकार नै मुरारका थिए ।
मुरारका र प्रधानको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो । सम्बन्ध राम्रो हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो चुनावमा गोल्छासँग प्रतिस्पर्धा गरेका कारण मात्रै मुरारकाले प्रधानलाई भोट दिएका थिएनन् ।
‘चन्द्रजी चण्डी समूहमा लागेपछि तपाईंलाई त्यो समूहले बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउँदैन,’ मुरारकाले प्रधानलाई यसरी फकाउन थाले, ‘हाम्रो टिममा आउनुभयो भने हामी तपाईंलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउँछौं । र, चुनाव जिताएर पनि देखाउँछौं ।’
मुरारका यो तर्कसँग प्रधान समहत भए । किनभने उनीसँग चन्द्र ढकालको जस्तो पैसा थिएन । चण्डीराजले चुनावको अन्तिम समयमा आएर सँधै पैसा भएको व्यक्ति च्याप्छन् भन्ने कुरा प्रधानलाई प्रष्टसँग थाहा थियो । किनभने त्यसअघिको चुनावमा पनि चण्डीले गोल्छालाई समर्थन गरेका थिए ।
प्रधानले सार्वजनिकरुपमै गोल्छाले आफूलाई पैसा खर्च गरेर हराएको आरोप लगाउँदै आएका पनि थिए ।
लामो समय चण्डी समूहमा रहेका दिनेश श्रेष्ठलाई पनि गोल्छा समूहले आफ्नो बनायो । गोल्छा-मुरारका समूह चण्डी समूह फुटाउन सफल भयो ।
चण्डी समूहमा रहेर विधान संशोधन गरी गोल्छालाई स्वत अध्यक्ष बन्न नदिने खेलमा लागेका दुई बलिया व्यक्ति किशोर प्रधान र दिनेश श्रेष्ठ गोल्छा समूहमा आए । यी दुई हस्ती गुमाउँदा चण्डीलाई दुई हात भाँचिए झैं भयो ।
तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण के थियो भने चण्डी सबैलाई गुमाएर भएपनि चन्द्रलाई साथमै राख्न चाहन्थे ।
किशोर प्रधान र दिनेश श्रेष्ठलाई चण्डीबाट छुटाउन सफल गोल्छा र मुरारका पदाधिकारी बैठकमा हुने चण्डीको हस्तक्षेपको खुलेरै विरोध गर्न थाले ।
गोल्छालाई के थाहा थियो भने विधानत आफु स्वतः अध्यक्ष भएको तर बीचमा खेलबाड गरेर आफुमाथि अन्याय गरेकोप्रति मतदाताको सहानूभूति हुनेछ ।
विधान संशोधनको मुद्दाले चन्द्रलाई पनि तनाव
विधान संशोधनको अन्यौलताले चन्द्र ढकाललाई पनि निकै सताएको थियो । उनी पनि संशोधन नभइदिए आफू बरिष्ठ उपाध्यक्ष लड्ने र यही विधानमा टेकेर अर्को कार्यकालमा स्वत अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा थिए ।
त्यसैले विधान संशोधन गर्नका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा भाँडिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा थिए ।
मन्त्रिपरिषद पुगेको फाइल अड्काएर भए पनि आफ्नो काम फत्ते गर्ने सोचमा थिए ढकाल ।
किनभने महासंघको विधानलाई साधारणसभाले पारित गरेर मात्र पुग्दैन । महासंघको विधान जिल्ला प्रशासन हुँदै मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गर्नुपर्छ । जुन रोकिने खतरा ढकाल समूहले देख्यो । गोल्छाले विधान संशोधन भए निर्वाचन लड्ने नै सन्देश दिएको तथा साधारणसभाले विधान संशोधन भएपनि मन्त्रीपरिषद् र अदालतबाट रोकिने संकेत बलियो थियो ।
यसबीचमा चन्द्रले एउटा प्रस्ताव राखेका थिए, त्यो थियो कि- अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गरौं, होइन भने ३ कार्यकालपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गरौं ।
किनभने आगामी निर्वाचनमा उनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष लड्ने सोच बनाएका थिए । र, आगामी कार्यकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था भए बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेर पनि फेरि अध्यक्षका लागि चुनाव लड्नुपर्ने लफडा आउने उनले देखे । जुन स्वभाविक पनि थियो ।
यसरी असफल भए चण्डी
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणालाई कार्यकाल पुरा गर्ने समय जति नजिक आउँदै थियो त्यति नै असहज स्थिति हुँदै गएको थियो ।
महासंघमा पहिलो पटक महिला अध्यक्ष बनेर इतिहासमा नाम लेखाउन सफल राणालाई विधान संशोधनको विषयले अपजसको भारी बोक्नुपर्ने आपत् आइलाग्यो ।
राणालाई नै अध्यक्ष बनाउने उदेश्यले महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने विधान संशोधन गरेको थियो ।
त्यही विधानअनुसार तत्कालीन बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वत अध्यक्ष बनिन् । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखरले जिते । भवानीलाई सहयोग गर्ने बहुमत प्यानलनै निर्वाचनमा जितेर आएको अवस्था थियो ।
२०७३ चैत २९ गते भएको महासंघको साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि केही समयमा नै महासंघभित्र बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष नबनाउने कुरा चल्न लाग्यो ।
१ वर्षपछि भएको साधारणसभा केही सदस्यले खुलेर नै महासंघमा बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने विधान हटाएर अध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखे । जसलाई साथ दिए महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य चण्डीले ।
महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजित भएका किशोर प्रधान पुनः जिल्ला नगरको उपाध्यक्ष बनेर आए । प्रधान बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखरसँग चुनाव लड्दा उनको प्यानलबाट पदाधिकारीमा जित्ने प्रमोद श्रेष्ठ बेनी नगरपालिकाको निर्वाचन लड्न गए ।
राजनीतिक निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै महासंघको विधानअनुसार श्रेष्ठको उपाध्यक्ष पद स्वत खारेज भयो । महासंघमा प्रधानको इन्ट्री तथा चण्डीको चाहनाअनुसार विधान संशोधनको कुरा अझै बढ्न थाल्यो ।
साधारणसभाले विधान संशोधन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो, जसको संयोजक बने चण्डी । ढकालको दवावमा महासंघले २०७६ कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गर्यो ।
महासंघको विधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका मुरारकाले विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउने वैधानिकतामाथि लिखितरुपमै चुनौति दिए ।
विधान संशोधन समितिलाई विधान संशसोधन आवश्यक नभएको समेत लिखितरुपमा सुझाव दिए । चण्डी बाहेक पूर्वअध्यक्षले विधान संशोधन गर्दा शेखरलाई अध्यक्ष बनाएर मात्र गर्नुपर्ने लिखित सुझाव दिए ।
३ वर्षे कार्यकालमा स्पष्ट अडान लिन नसकेपनि अन्त्यमा अध्यक्ष राणाले अडान लिइन् । चण्डी निकट रहेर काम गरेको आरोप लागे पनि राणाले गोल्छालाई अध्यक्ष बनाएर मात्र विधान संशोधन गर्न हुने पक्षमा उभिइन् ।
मुरारकाको कानूनी चेतावनीपछि ब्याक भए चण्डी
यी सबै कुरा देखेपछि बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भनेर लागेका चण्डी ब्याक भए ।
महासंघलाई विधान अधिवेशन फिर्ता लिनको लागि सजिलो अस्त्र मुरारकाले राखेको फरक मत भयो । जुन फरक मत अनुसार महासंघको पदाधिकारी बैठकले विधान संसोधन समितिलाई विशेष साधारणसभाको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्यो ।
र, विधान संशोधन समितिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बनाउनुपर्ने सहितको राय दिँदै विशेष साधारणसभा स्थगित गर्न सुझाव दियो ।
विधान संशोधनको विपक्षमा मत जायर गर्दै वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न गरेका मुरारका शक्ति केन्द्र बने ।
यसअघि अध्यक्षबाट बाहिँरिदै गर्दा मुरारकाले महासंघ छाडेर उद्योग परिसंघ गठन गरेका पूर्वअध्यक्ष बिनोद चौधरीलाई साधारणसभामा बोलाएर सम्मान समेत गरेका थिए । जसकारण माडवारी समुदायमा मात्रै होइन समग्र निजी क्षेत्रमा मुरारकाको प्रभाव बढ्दै गएको थियो ।
मुरारकाले लिएको अडान र राणाको मध्यमार्गी भूमिकाले महासंघलाई एकताबद्ध गर्न मद्दत पुर्याएन, महासंघको विधानको संरक्षण पनि भयो ।
महासंघको विधान संशोधन नहुँदा गोल्छा स्वत अध्यक्ष भए भने मुरारका नयाँ शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित भए । किनभने विधान संशोधन हुन नदिनका लागि सबैभन्दा तीब्र लबिङ गर्ने उनै मुरारका हुन् । राजनीतिमा होस् या अन्य कुनै संस्था, जसको एजेण्डाले जित्छ उनै शक्तिकेन्द्र हुन्छ ।
चण्डी र भवानीको सम्बन्ध टुटाउन के के गरे गोल्छा-मुरारकाले ?
अध्यक्ष भवानी राणासँग मिलेर विशिष्ट सदस्य चण्डीले महासंघबाट अबैधानिक ढंगले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको विषयलाई पनि गोल्छा/मुरारका समूहले जोडतोडले उठायो । यो समूहका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान महासंघका कोषाध्यक्ष थिए ।
अध्यक्ष राणा र विशिष्ट सदस्य चण्डी मिलेर आर्थिक अनियमितता गरेको सूचनाहरु प्रधानले पत्रकारहरुलाई दिन थाले । यही क्रममा कुनै एक पत्रकारले प्रधानले सूचना दिने क्रममा बोलेको अडियो भवानीकहाँ पुर्याए ।
महासंघमा भएको अनियमितता बाहिर आएपछि हंगामा भयो । अध्यक्ष राणा र चण्डीले आफ्नो शक्ति लगाएर ज्ञानेन्द्रलाललाई चरम दबाब दिए । त्यसपछि उनले राजिनामा दिए ।
कृषि उद्यम केन्द्रका नाममा सरकारले दिएको अनुदानमा अनियमितता भएको विषय बाहिर आएपछि अख्तियारले पनि महासंघभित्र नजर लगायो ।
अध्यक्ष राणालाई आपत पर्यो । यसरी समस्यामा परेकी राणालाई गोल्छा/मुरारका समूहले दवाव बढायो ।
बिराटनगरमा भएको किशोर प्रधानको पहिलो उम्मेद्वारी घोषणासभामा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सार्वजनिकरुपमै महासंघको ‘अडिट सिस्टम’ माथि प्रश्न गरे ।
गोल्छाले कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको अनियमिततालाई नै इंगित गरेका थिए । यो विषयले पनि महासंघको पदाधिकारी बैठकभित्र हंगामा मच्चायो ।
मंसिरमै विधान संशोधनको च्याप्टर क्लोज भइसकेको थियो । स्वत अध्यक्ष बन्दै गरेका गोल्छाले यस्तो गंभीर प्रशन उठाएपछि अध्यक्ष राणालाई थप दवाव पर्यो ।
महासंघबाट चण्डीले लाभ पाउन छाडे । त्यसपछि भित्रभित्रै अध्यक्ष राणा र चण्डीबीचको प्रगाढ सम्बन्ध फाट्दै थियो ।
चण्डीबाट भवानीलाई छुटाउन गोल्छा-मुरारका समूहले निरन्तर दबाब बढाउँदै गयो । चण्डीको हप्काइदप्काइबाट आजित भएकी भवानी राणाले अन्तिम समयमा आएर क्याम्प चेन्ज गरिन् ।
क्याम्प चेञ्ज गरेर आफूले भनेको नमानेपछि चण्डीले सार्वजनिक मिडियामार्फत् नै भवानी राणाको हैसियत नभएको भन्दै गालीगलौज गर्न थाले । यसरी चण्डी गालीगलौजमा उत्रिएपछि उनीहरु जोडिनै नसकिने गरी फाटिए ।
र, अन्त्यमा भवानीले पनि किशोर प्रधानलाई पूर्णसमर्थन गरिन् । यतिसम्म कि प्रधान समूहको प्यानल भवानीको घरमा बिहानै टिका लगाएर मात्रै उम्मेद्धारी दर्ता गर्न गयाे ।
चण्डीविरुद्ध शुद्धीकरण अभियान
गोल्छा/मुरारका समुहको एकसूत्रिय एजेण्डा थियो यो निर्वाचनदेखि जसरी भएपनि चण्डीलाई महासंघमा सक्रिय हुन नदिनू । विशिष्ट बनाएर महासंघ छिरायो भने चण्डीले चरम राजनीति गरेर अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै उनीहरुले व्यक्तिको मात्रै नभई चण्डी प्रवृत्तिको शुद्धीकरण अभियान नै सञ्चालन गरे ।
मुरारकाले भित्रभित्रै खेले भने गोल्छा खुलेआम चण्डीविरुद्ध उत्रिए ।आफूले भोगेको पीडाले गोल्छालाई इमोशनल बनाइहाल्थ्यो । र, कहीलेकाहीँ बढी आक्रमकरुपमा प्रस्तुत हुन्थे ।
केही वर्षअघिसम्म चण्डीकै पक्षमा रहेका अञ्जन श्रेष्ठलाई पनि गोल्छा-मुरारका समूहले आफ्नो बनाइसकेको थियो । युवा अञ्जन श्रेष्ठ व्यवसायीमाझ निकै लोकप्रिय छन् ।
यो चुनावमा अञ्जनले चण्डीका खास कार्यकर्ता उमेशलाल श्रेष्ठलाई भारी मतान्तरले पराजित गरे । १०१ मत रहेको वस्तुगतमा अञ्जन र उमेशलाल उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धी थिए । अञ्जनले ६२ मत ल्याए भने उमेशलालले ३७ मत मात्रै । अञ्जनलाई नै हालिएको २ मत बदर भयो ।
गोल्छा-मुरारका समुहका एशोसियट उपाध्यक्ष सौरभ ज्योतिले चुनाव जित्नेमा चण्डी समुहसमेत सहमत थियो । किनभने मुरारका र गोल्छाको एशोसियटमा पकड भएको मानिन्थ्यो ।
त्यसैले यो चुनावमा गोल्छा-मुरारका समुह चण्डीको आधार क्षेत्र मानिने जिल्लानगरमा खेल खेलेर विकेट झार्नतर्फ केन्द्रित भयो ।
त्यसैको परिणामस्वरुप चण्डीराज ढकालले दाबी गरे भन्दा ठीक विपरित जिल्ला नगरतर्फ उपाध्यक्ष र बहुमत कार्यकारिणी सदस्य प्रधान समुहले जित्यो । प्रधान समुहका दिनेश श्रेष्ठले ढकाल समुहका गुणनिधि तिवारीलाई उल्लेख्य मतले पराजित गरे ।
चन्द्र ढकालको जिल्ला नगरमा प्रधानको भन्दा कम भोट आउनु र उपाध्यक्षका प्रत्यासीले निर्वाचन हार्नु र सदस्यसमेत प्रधान समुहको बहुमत आउनुले चण्डीराज ढकालले जिल्ला नगरलाई देखाएर गर्ने गरेको बार्गेनिङ निकै कमजोर भएको देखिएको छ ।
जिल्ला नगरमा नै आफ्नो पकड भएको चण्डीले दाबी गरेपनि साढे ३ वर्ष अगाडि चण्डीले नै समर्थन गरेका दिनेश श्रेष्ठले जिल्ला नगरको उपाध्यक्ष हारेका थिए ।
यो पटक चण्डीको पक्षमा नभएर अर्को पक्षबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेशले जितेको र कार्यकारिणी समितिसमेत बहुमत आएको हुँदा चण्डीले जिल्ला नगरलाई देखाएर गर्ने बार्गेनिङ अब महासंघमा नचल्ने देखिएको छ ।
एशोसियटमा गोल्छा- मुरारकाभन्दा चन्द्र एक्लै शक्तिशाली
यो पटक महासंघको निर्वाचनमा अर्को अप्रत्यासित नतिजा एशोसियटमा आयो । एशोसियटमा प्रधान समुहका सौरभ ज्योतिलाई निकै नै बलियो उम्मेद्वार मानिएको थियो ।
अघिल्लो चुनावमा मुरारकाले सदस्यको टिकट नदिएका रामचन्द्र संघईले यो पटक एशोसियटतर्फ उपाध्यक्षमा ढकाल समुहबाट निर्वाचन जितेर आफ्नो शक्ति देखाइदिए । १९ जना कार्यकारिणी सदस्यमा १० जना प्रधान समुहबाट आए भने ९ जना ढकाल समुहबाट ।
एशोसियटतर्फ प्रधान समुहको पराजयलाई हेर्ने भने एशोसियटमा शक्तिशाली भनिएका गोल्छारमुरारका समूह कमजोर भएको देखियो ।
प्रधान समुहको सबैभन्दा बलियो मानिएको एशोसियटको उपाध्यक्षमा उल्टै ठूलो मतान्तरले निर्वाचन हार्नु र बरिष्ठमा कम मत आउनुले गोल्छारमुरारकाले भने अनुसार एशोसियटका मतदाता नचलेको देखियो ।
पछिल्लो ३ कार्यकाल महासंघमा एशोसियटतर्फ मुरारका नै हाबी थिए । मुरारका सुरज वैद्य अध्यक्ष हुँदा एशोसियटतर्फ उपाध्यक्ष जितेका थिए ।
त्यसपछि भएको निर्वाचनमा प्रदिपजंग पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा भाष्करराज राजकर्णिकार समूहले एशोसियटमा ‘क्लिनस्विप’ नै गरेको थियो । त्यो बेला भाष्कर समुहबाट एशोसियट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्वाचन जितेका थिए ।
साढे ३ वर्षअघिको निर्वाचनमा चन्द्र ढकाल एशोसियट उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । त्यो बेला ढकाल मुरारकाको समुहमा नै थिए । किशोर प्रधानले एशोसियटमा उपाध्यक्षको उम्मेद्वार नै पाएनन् भने सदस्य लड्ने ३ जनाभन्दा बढी थिएनन् ।
चन्द्रले एशोसियटमा पाएको मत र संघईले एशोसियट उपाध्यक्ष जितेको हुँदा एशोसियटमा चन्द्रको प्रभाव मुरारकाको भन्दा बढी देखियो । एशाेसियटले चण्डीलाई चिन्दैन भन्दा अत्युक्ति नहाेला ।
गोल्छालाई मतदाताको सन्देश
महासंघको विधानअनुसार आइतबारदेखि शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष बनेका छन् । स्वत अध्यक्ष बन्दै गरेका गोल्छा तटस्थ बस्नुपर्नेमा किशोर प्रधानको प्यानललाई आफ्नो प्यानल भन्दै खुलेरै भोट माग्दै हिँडे ।
मतदाताहरुले तटस्थ बस्नुपर्ने अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले गुटबन्दी गरेको रुचाएनन् । र, शेखरले नचाहँदा नचाहँदै पनि पदाधिकारीमा चन्द्र र रामचन्द्र आए ।
गोल्छाको यो गतिविधिले चन्द्रको मन नराम्रोसँग दुखेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।
गोल्छाले २ वर्ष ४ महिनाको अध्यक्षको कार्यकाल चलाउनको लागि सुविधाजनक बहुमत पाएका छन् । चुनावअघि अर्को प्यानल भएपनि गोल्छा अब ढकाल र संघईसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
गोल्छालाई अध्यक्ष भएको ६ महिनामा हटाउने भनेका चण्डीराज जिल्ला नगरमा नै कमजोर बनेपछि उनले चाहे अनुसारको कार्यकारिणी समिति नै आएन ।
चन्द्रले चण्डीको बलमा नभएर आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध र बलमा चुनाव जितेका हुन् ।
यो निर्वाचनले अहिलेसम्म महासंघमा राज गरेका चण्डीराजलाई सबैभन्दा कमजोर बनाएको छ । महासंघको राजनीतिक समीकरणमा एशोसियटमा चन्द्र शक्तिशाली खेलाडीकारुपमा उदाएका छन् ।
चन्द्रलाई पनि मतदाताले के सन्देश दिएका छन् भने ‘अब तिमीले चण्डीलाई छोड्नैपर्छ ।’ किनभने पछिल्लो समय चन्द्र ढकालले सार्वजनिकरुपमै आफ्नो प्यानलको बहुमत आउने र शेखर गोल्छालाई काम गर्न अफ्ठ्यारो हुने चेतावनी दिँदै आएका थिए । जसलाई मतदाताले अस्वीकार गरिदिए ।
चन्द्रले चाहेर पनि शेखरले नचाहँदासम्म यो कार्यकालमा चण्डी महासंघ भित्र्याउन सक्ने संभावना छैन । अब चन्द्र सामू गोल्छासँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिलेसम्म बोकेको ब्यागेज बिसाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत विषयमा भन्दा चरम गुटबन्दी र निर्वाचनको जोडघटाउका कारण चर्चामा आइरहने महासंघलाई अब आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित बहस र एजेण्डामा हिडाउँदै निजी क्षेत्रको लबिङलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।
गुटबन्दी हटोस्, निजी क्षेत्रको जय होस् ।